Olee otú Tinye ID3 Tags Gị Music gbasara mkpokọta
> Resource> Download> Olee otú iji Tinye ID3 Tags na faịlụ MP3 na ala
Ọ bụrụ na ị bụ onye na nnukwu ofufe nke dijitalụ music, ị gaghị enwe-amaghị na ozi nke faịlụ MP3, dị ka track aha, ọgụ egwu, tọhapụ afọ na ọbụna album nkà. Ụdị ozi a na-niile esịne ke ID3 mkpado, nke bụ ụdị nke metadata ji kọwaa MP3 faịlụ na na-mgbe agbakwunyere na faịlụ. Ma n'ụzọ dị mwute, ma ọ bụ na-efu mismatched mkpado nwere ike a na-ahụkarị gị na nnukwu music collection. Mgbe ahụ, olee ịgbakwunye ID3 mkpado gaa na niile MP3 faịlụ mfe? Ebe a bụ ihe ngwọta nyere gị aka pụta. The Wondershare TidyMyMusic maka Mac (Wondershare TidyMyMusic) na-akpaghị aka okụt ID3 mkpado na ogbe gị dum music n'ọbá akwụkwọ. Ihe bụ ihe ọzọ, ọ na-enye gị ikike dezie ID3 mkpado site onwe gị. Download ya iji wụnye na gị Mac na mgbe ahụ lelee ndị na-esonụ nzọụkwụ-site-nzọụkwụ ndu.
1 mbubata gị music n'ọbá akwụkwọ gaa TidyMyMusic
Mgbe ị mepee omume mgbe echichi, ọ ga-iṅomi gị iTunes n'ọbá akwụkwọ ma na-egwu niile na. Na usoro ihe omume ga-eme scanning na importing oge ọ bụla ị na-re-imeghe ya.
Cheta na: Ị nwere ike music na-adịghị jisiri site iTunes. Gaa idozi Music na ịdọrọ ndị music nchekwa na faịlụ tree ma ọ bụ pịa Open File button ka ịgbakwunye music na.
2 Chọta ID3 mkpado maka faịlụ MP3
Gaa nkụnye eji isi mee akụkụ nke usoro si window. Tinye akà rà Chọọ maka unidentified Songs na pịa iṅomi bọtịnụ. Mgbe ahụ, a omume ga-amalite chọta ID3 mkpado maka gị niile music.
Ọ bụrụ na ị nwere nnukwu music n'ọbá akwụkwọ, anyị na-atụ aro ị na-eji scanning ọrụ mgbe ị ka nwere ike họrọ nanị otu song na pịa Chọpụta bọtịnụ na ala aka nri iji chọta ya ID3 mkpado.
3 Tinye ID3 mkpado na songs
Mgbe ihe omume ahụ na arụchaala nchọgharị usoro, ị nwere ike họrọ otu song na tụnyere ya ID3 mkpado na nri n'igbe. Ọ bụrụ na ndị ọhụrụ ọmụma bụ ihe dị gị mkpa, i nwere ike pịa Mee bọtịnụ na ala ka embed ID3 mkpado na MP3 faịlụ. Ọ ga-abụ ngwa ngwa ma ọ bụrụ na ị họrọ ọtụtụ songs na itinye n'otu oge.
Rịba ama: Ọ bụrụ na ị chọrọ dezie ID3 mkpado site onwe gị, ọ dị mfe. Họrọ otu song na pịa Dezie icon na nri n'igbe. Mgbe ahụ niile ozi na nri n'igbe ga-agbanwe na-editable. Ịgbanwe album nkà site na-adọkpụpụta ihe oyiyi na album nkà ebe na pịnye ke ọ bụla okwu jupụta na edezi ubi nke ozi ndị ọzọ.
Azụ ọzọ. Ị kwesịrị ị na-enye a usoro a laa na isi na n'ihi na a magburu onwe music ahụmahụ.
Ebe a bụ video nkuzi iji lelee: